I-SPHC ekhethiweyo ye-DD11 yokusetyenziswa kwezorhwebo Ipleyiti yentsimbi esongiweyo eshushu yezahlulo ezinzulu zemoto
I-DD11 yicarbon esezantsi kakhulu, ishushu isongelwe ngezinto zetsimbi ezisetyenziswa kakhulu ekubunjweni kobushushu kwindawo eyomileyo okanye eyojiweyo kunye neoyile. Izinto eziphathekayo zinempawu ezifanelekileyo ze-welding kwaye zilungele ukusetyenziswa ngokubanzi. I-DD12, i-DD13 kunye ne-DD14 icacisa nokuba amanqanaba amachiza asezantsi kunye noomatshini abenza bagqibelele ukuzoba nzulu, umzobo ongezelelweyo kunye noxinzelelo olunzima ngakumbi.
Izinto zensimbi ye-HR ezinje nge-DD11, i-SPHC, i-SPHD, i-STW22, i-S315MC, i-S420MC isetyenziswa ikakhulu njengemigca eyahlukeneyo kwaye isetyenziswa ngokubanzi ekwenziweni kweemoto, iindawo ezibandayo ezixineneyo kunye namacandelo ezakhiwo, njl.
I-A283 A285 ipleyiti eshushu eshushu yentsimbi Ingqele eqengqelekileyo yentsimbi ye-A36
Isinyithi seBanga C esingu-A283 Yeyentsimbi eyakhiwe ngesinyithi. Eqine A283 Grade C ipleyiti yesinyithi iphantsi okanye phakathi ezantsi. Ipleyiti yesinyithi eyi-A283 yeBanga C ihanjiswa ikwimeko eshushu eqengqelweyo. I-RuiYi ibonelela nge-A283 yeBakala C yentsimbi yeplate eshushu ishushu ukuya kuthi ga kwi-220mm.
Udidi: Isinyithi seCarbon yoLwakhiwo
IBakala le-Steel: iBanga C
Umgangatho: I-ASTM A283
Iyafumaneka: iipleyiti, iiflethi ezibanzi, imitya, amacandelo kunye nemivalo
Ipleyiti yentsimbi ye-A283 yeBakala C ingahanjiswa + AR, + N, okanye + M imeko.
Ukulungelelaniswa kokuqengqeleka (+ N): inkqubo yokuqengqeleka apho ukugqitywa kokugqibela kuqhutyelwa kwinqanaba elithile lobushushu elikhokelela kwimeko yezinto ezilinganayo naleyo ifunyenwe emva kokumiswa ngendlela efanelekileyo ukuze amaxabiso achaziweyo eepropathi zoomatshini agcinwe nasemva kokuqheleka.
I-as-roll (+ AR): imeko yokuhanjiswa ngaphandle kokuqengqeleka okukhethekileyo kunye / okanye imeko yonyango lobushushu.
Ukuqengqeleka kwe-Thermo-mechanical (+ M): inkqubo yokuqengqeleka apho kugqitywe khona okokugqibela kwinqanaba elithile lobushushu elikhokelela kwimeko yezinto kunye neepropathi ezithile ezingenakufezekiswa okanye ziphindaphindwe ngonyango lobushushu kuphela.
Intsimbi ye-A283 yeBakala C iyakwazi ukuqhutshwa ngemisebenzi eqhelekileyo efana nokusika, ukugaya kunye ne-welding.
Intsimbi ye-A283 Gr C Isetyenziselwa ukwakha iifektri, umbane omkhulu wokuhambisa umbane, iibhlorho, izithuthi, iziko lokubilisa, izikhongozeli, iinqanawa, njl. njl.